Qaybo ka Deep barbar
Golaha Qaybo ka barbar Deep
Art Birta Products Co., Ltd waxaa la aasaasay sannadkii 1999, waana shirkad gaar ah wax soo saarka leh aagga guud ee 12000 mitir oo laba jibbaaran. Waxaan bixinaa kala duwan ee sheet bir qaybo ka qoto dheer barbaro, qaybo ka jediyay, kiniisadaha welded, semi-dhammeeyayna iyo dhammeeyey taangiga autoclave wax soo saarka, weelka IBC, musqusha. Waxaan sii wadi in ay qeybiyaha ah taasoo keentay in arimahan.
Art Birta Products Co., Ltd ku qalabeysan yahay set ka buuxa mashiinada Haydarooliga, mashiinada adhijirrada, macsarada farsamo, TIG, mig, mashiinada alxanka kaalinta, lathe CNC iyo qalabka baaritaanka loo baahan yahay si ay kuu siiyaan wax soo saarka ugu qanci karo. Our xirfadaha gaarka ah, oo talanti, aqoon, iyo raynrayn sheet bir aad u sameynta caawimaad jidka loo marayo iskaashiga nala dhan.
Art Birta Products Co., Ltd waxa uu ku yaalaa degmada Fenghua, Ningbo, oo ku saabsan 20kms ka Airport Ningbo iyo 40kms badhtamaha magaalada ee Ningbo. Your booqasho wakhti kasta waa la soo dhaweynayaa.